LibreOffice 4.0.0 RC1 inogona kusanganisira rutsigiro rweMunhu | Kubva kuLinux
LibreOffice 4.0.0 RC1 inogona kusanganisira rutsigiro rweMunhu
Ndinotsigira Sei Vanhu? Ndizvozvo, Vanhu, sisitimu inoitwa na Mozilla Firefox kuti uchinje ganda rebrowser uye uripe iro pachako kubata.
Uku kushanda kunogona kuitiswa nekusarudzika mu LibreOffice 4.0, nekungosvika chete LibreOffice »Zvishandiso» Kugadziriswa "Sarudza Persona uye isu taizoona chimwe chinhu chakafanana neichi:
Nhau dzinouya kubva muruoko rwe Michael Meeks mugadziri we LibreOffice uye iwe unogona kuverenga zvakawanda nezvazvo pa Iyi link.
Kunyanya, kunyangwe iro zano risina kushata, asi ini ndinofunga kuti iyi haisi iyo shanduko inoonekwa iyo vashandisi veiyi Office Suite vakamirira. Zvisinei, idanho rekuenda kumberi, isu tichaona mafambiro anoita nyaya yacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » LibreOffice 4.0.0 RC1 inogona kusanganisira rutsigiro rweMunhu
Kwete zvakaipa, asi ini ndinosarudza imwe shanduko yechitarisiko, sezvazvinotaura muchinyorwa.
Ini ndinoshandisa LOv 4.0.0 RC2 .. Ndinoongorora sei kuti ndinokwanisa kuisa "Vanhu"
Kana ichishanda 😀
Munyaya inoti so .. ¬¬
¬¬ Ndakatozviona .. xD
xDD Iye zvino ndinofanira kugadzirisa musoro wepositi .. Haichakwanise, asi inosanganisira.
Zvakanaka .. ini ndinowana iyo sarudzo asi kubva ipapo kune iyo tema shanduko .. pane nzira refu. Ichave iyo KDE here? xD
Ini ndinoda chaizvo kuti mufananidzo wekutanga unotaridzika sei, zvakandiyeuchidza nezveMozilla, asi kuve ini ndinotenda kuti izvo izvo vashandisi zvavangade zvakanyanya kushandura icon yemusoro.
Kwete chete mifananidzo, asi iyo yakazara interface. Ehe saizvozvo, kwete saCalligra, nekuti kunyangwe zvikaedza sei ini, handijairire kuishandisa.
Calligra akanaka kwazvo, asi ini ndakanga ndisingakwanise kuchinjika zvakanaka futi, saka ndakadzokera ku libreoffice. Izvo zvaivewo nekusawirirana neiyo odt yakagadzirwa palaptop ine libreoffice uye iyo yakagadzirwa pane desktop yangu ine calligra ...
Calligra ichokwadi zvinodhura zvakanyanya kuchinjisa uye zvichienzaniswa ne liibreoffce inonyanya kukosha, asi kunyangwe zvakadaro yakanaka kwazvo uye Libreoffice iri kuita nhanho huru.
Handisi kuti kwete. Ini ndinoshandisa Calligra nguva nenguva, asi ini handikwanise kunyatso kujaira uye ndotarisa, ndakazviedza ...
Izvo zvinokwanisika kushandura iwo madingindira ezvidhori, kutaura zvazviri kune mamwe akanaka kwazvo, ini handirangariri maitirwo ayo mumawindo, ingave iri nyaya yekuzvinyora
Pindura kune irving
Ichokwadi kuti kusimudza kumeso kukuru kunodiwa, asi ini ndinoda zano ^ ^
Nekutsigirwa kwevanhu ini ndaifunga yaive rutsigiro rwevakaremara. Iko kuseka.
Ivo havafanirwe kutambisa nguva nehurombe senge.
Chii chakaitika kune webhu interface yavaitaura nezvayo, iyo yaizobuda mune inotevera vhezheni ini handizive kuti mangani mavhezheni apfuura?
Haisi webhu interface, chirongwa chakafanana neGoogle Docs, huya, hofisi suite mugore.
Ivo zvakare vakati kuiisa kune Android neIOS, asi zvinhu izvi zvinotora nguva.
Ini ndaifunga kuti ichave iri yewebhu interface uye kuti inogona kuiswa pane chero server.
Zvisinei, zvinoita kunge kuri kuenda kwenguva refu.
Kune rimwe divi, vanhu vazhinji vari kukumbira kuti vachinje maitiro ekushandisa, ini pachezvangu ndinoda kuti zviri sei uye ndinosarudza kuisa zvigadziriso mairi pane shanduko muchimiro icho chingangoita chinetso.
Rangarira zvakaitika naBlender, pakutanga vashandisi vakarasika zvachose neiyo nyowani interface uye zvaive "zvakada" sekudzidza kubata chirongwa zvakare asi nerombo rakanaka zvaive zviri nani.
Ini ndinongovimba kuti muLibreOffice havamhanye nekuteedzera chimiro cheMicrosoft suite, pachinyorwa ini handisi fan asi pane izvo ini ndinozvifarira kuti igare sezvazviri, ndinongobvunza izvo.
Kuedza kunoitwa nevagadziri kunoombera; Asi kana isu tikataura nezve shanduko padanho reiyo interface, ini ndinofunga kusimudza kumeso kunonyatsodikanwa, kuvandudza iyo interface zvakanyanya.
Kune rimwe divi, ndinofunga vanofanirwa kutarisisa kuyedza zvakanyanya padanho rinoshanda.
Pffu inofanirwa kungoita imwe interface ..., inoratidzika kunge yakashata senge, handisi kuti vanoteedzera ms office, asi chimwe chinhu senge iyo osx suite, yakapusa uye pamwe chimwe chinhu chitsva, taura nevagadziri uye uvateerere kamwechete.
Kufanana nevamwe, ndinofunga izvi hazvina kukwana. LibreOffice inokurumidza inoda shanduko yesystem.
Runyerekupe kuti chirongwa cheApache chekugadzirisa chinja cheOpenOffice 4.0.Inoratidzika kunge yakafanana neLotus Symphony
Chinhu chakadai kana chimwe chakadai.
Ini ndinofunga chikanganiso dhizaini kuisa yakatwasuka minda, ona mune iyo skrini «font» semuenzaniso, mumatombo emidziyo maturusi, zvinotondiita kuti ndide kugadzira mockup yerusununguko neyakagadzirwa nyowani, uye kune rimwe divi, ndinogona kurega Tihanum igadzire chii chinonzi iye akasika akanakisa maficha faenza inogadzira ma icon e libreoffice 4.0 yavanoti?
Oh Mwari wangu! Izvo zvakatonyanya kushata pane pakutanga xd
Hmmm, handidi kunetseka nazvo. Ini ndinofunga chinhu chikuru chingave chekuvandudza 100% kuenderana pakati pevachazouya vhezheni dzeMicrosoft Office, kupfira mate pamberi peavo mabastard ayo anoita kuti zviomere neimwe yega vhezheni vhezheni. Zvakare, wedzera mashandiro akadai seakagadzira dhayagiramu kana maturusi matsva senge macros. Ini ndinofunga izvi zvaringana. Mufaro…
Ndingaite sei kuti ndiwane nzvimbo yekushandisa iyo beta?
Ini handidi chero kumeso shanduko maererano neiyo interface modhi. Sezvazviri ikozvino zvine zvibereko. Handisi kureva kuti iwe unofanirwa kumisa hunyanzvi kana chero chinhu chakadai, asi ini ndinofunga kuti kuisa mufananidzo wepashure muLibreOffice inotaridzika chaizvo uye parizvino zvakwana.
Ini dzimwe nguva ndinofunga kuti sezvo zvichishanda, zvimwe zvacho hazvina basa, asi zvinofanirwa kuzivikanwa kuti chifananidzo "chinotengesa", ndiani wako kana uchitsvaga mukadzi uye asina basa kuti akanaka kana akashata? uye ndiro yechikafu chinovaka muviri uye nyowani asi isina kuiswa zvakanaka? Ini ndinofunga kuti dzimwe nguva kugadzirisa izvo zvinoshanda uye zvatova, pasina kuisa aesthetics pairi, ndeyekuratidzira, haufunge? Saka ini ndinofunga chinongedzo chakakosha, kuti vashandisi vatsva vanonyanya kugamuchira chigadzirwa zviri nyore.
Chii chinoitika ndechekuti LibreOffice haisi "chigadzirwa" senge M $ Hofisi, ihofisi yemahara suite inochengetedzwa uye kuvandudzwa nenheyo isingabatsiri, saka haufanire kutengesa chero chinhu, kana chero zvakadaro, sezita rayo inoratidza, ipa rusununguko. Ini zvakare ndinotenda kuti, sezvo paine zviripo zvakadzikiswa zviwanikwa, vanofanirwa kutarisa mashandiro uye kugadzirwa kwezvinhu zvitsva, iyo interface haina kushata, inoshandiswa zvakanyanya, panguva yeHofisi 1997 hapana munhu akanyunyuta.
... Ini ndinofunga kuti zvirokwazvo kuenderana uye kudzikama kwemafaira emafaira kwakakosha kwazvo, asi ini ndinofunga kuti mushandisi mushandisi anogona kugadzirwa nenzira yekuti inofadza ziso, pasina kushungurudzwa.
Ini ndinofunga kuti kungoisa yetsika mavara gradients zvingave zvakakwana kuti utarise pakuvandudza fomati yemagwaro ako, uye pamwe kuwedzera new icon theme.
Ini handina basa chaizvo neiyo interface nekuti ini ndinoiona iri yakanaka kwazvo. Ini handidi kuti vatange kuita shanduko senge MS muHofisi yavo yazvino, mandiri ndinozvirasa zvachose uye kunyatso kudhinda kana kugadzira Ratidzo yezvandiri kuita zvinonditorera nguva yakawanda kupfuura zvayakaita mushanduro dzekare Mune yangu kesi, iyo nguva inonditora kuti ndiite chimwe chinhu ndizvo zvinotsanangura kugadzirwa kwangu), yaive nesarudzo mubha yepamusoro, inosvikika. Ini ndinofunga kuti LO yakanaka kwazvo sezvazviri parizvino uye kuti izvo zvavanofanira kushanda zvakanyanya kuenderana nemamwe maOffice Suites nekuti ndamboita basa muLibreOffice, ndinovhura muExcel gare gare uye zvese zvakafanana kunze kwemamwe mativi, mitsara, iyo font dzimwe nguva, nezvimwe. Zvikasadaro yakanaka kwazvo uye inovhura mune chero vhezheni yeakanakisa, ingave yekare kana nyowani. Zvisinei, zvakanaka kuti ivo vanoramba vachiwedzera zvinhu zvitsva.
Kubva pakuona kwekushandisika kwemaonero, akawanda mablushes anonditsamwisa ini kana ndichishanda, iyo interface haisi yekuisa Wallpaper. Ini ndoda gtd (tora-zvinhu-zviitwe) nekukurumidza !!
Kushanda uye yakanatswa aesthetics. LibreOffice iri asi zvirinani kwazvo
kupfuura Microsoft Word. Chinhu chega chandinofunga chakashaikwa ndechekuvandudza aesthetics
yemifananidzo. Asi kwete nevanhu. Ini ndinongoshandisa Firefox uye handisati ndamboita
yakaiswa People. Nyaya yekuravira.
Unogona kundiudza zviri nani? Ndatenda.
Iwe hautombozvitenda. Paunenge uchinge wadzidza kuti zvinhu zviri muMicrosoft Office zvinoita sei sezviri chero chirongwa. Uye ngatiregei kutaura nezvesimba, Libreoffice yakaganhurirwa. Semunhu anoshandisa Libreoffice, ini ndinokuudza kuti kana iwe ukashanda nemafaira akaomarara, zvakanaka. Kutanga kuisa mifananidzo uye iwe uchaona panogara simba. Ini ndinoshanda nehombe vhoriyamu vhoriyamu uye nebasa nemapikicha, semuenzaniso mana megabytes mune odt, hazvishande
Zvisinei Microsoft Office inodya zvaunokanda pairi. Libreoffice yakanaka, uye pakuve nharaunda zvakanaka, asi ngatirege kuenda kure zvakanyanya.
Pindura kuna Arkangelovich
Zvakanaka, ini handizive zvaunofunga, kunyangwe ini ndichifarira zano rekupa zvakasarudzika kumashandisirwo uye sisitimu yekushandisa, kana ndichida zvimwe hwaro hwacho hwapa basa rakawanda zvine chekuita nekubatana nedesktop, zvisinei ; semuenzaniso ne KDE, Gnome, XFCE, nezvimwe. sangana zvese zviri zviviri maererano neyekutanga uye yetsika theme. Ini ndinotaura pane zvataurwa pamusoro nekuti mune dzimwe nzvimbo uye mune ino, mareferenzi akaitwa kune ekuti iyo interface ye suite ndeyechinyakare kwazvo uye, kutaura chokwadi, ine kutaridzika nekunzwa kwesoftware kubva kuma90 ezana ramakore rapfuura.
Zvisinei, iko kwakajeka kuravira kwako, ini handizive zvaunofunga.
Handisi kuti LibreOffice inofanirwa kunge iine Ribbon-dhizaini interface, asi huya, shanduko yatove kudikanwa mumifananidzo uye nenzira iyo ruzivo rwakarongedzwa mumabharaki ... icho chinhu chiri chako pachako, hongu.
Pamusoro pazvose, ichokwadi, tinoda kubatanidzwa kwakawanda, kuenderana kwakawanda .. nezvimwewo
Ini ndanga ndichitaura naMichael Meeks kubva kuLibreOffice (libreoffice [at] lists.freedesktop.org) ………. Ndakamubvunza kana vaine API yemaraibhurari eVCL ayo LibreOffice anoshandisa ……. Vakandipindura kwete…. Ivo chete havana kana ruzivo ... ivo vakandipa izvi ...... https://wiki.documentfoundation.org/Development/WidgetLayout …… .. mune ino link zvinoratidzwa maitirwo emaraibhurari eVCL uye mashandiro awo…. http://docs.libreoffice.org/vcl/html/classes.html ..........
chimiro chose chinoenderana nemaraibhurari aya …… ​​.. Pamusoro pezvese, chakashata ndechekuti aya majeti haana muGtk 3.6 kana Qt 4.9 …………
uye maraibhurari aya haana kuchinjaniswa kuti ashande neGtk3 neQt 4.9 ………. GTk3 neQt 4.9 havana mashandiro anoshandiswa neLibreOffice muhukama ……………
Maraibhurari ese eVCL anofanirwa kunyorwazve kuti aenderane neGtk 3.6 kana Qt 4.9, ibasa rakakura ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.6 kana Qt 4.9 ibasa rakanaka asi vanozviita.
Kana iwe ukawana dzidziso ine mienzaniso yakapusa neVCL kupfuudza iyo ruzivo, ini ndinoida ………
Ndiri naCharles Schulz anobva kuLibreOffice… paGOOGLE +… https://plus.google.com/u/0/communities/105920160642200595669
unogona kubata vagadziri veLibreOffice
Michael Meeks naBjoern Michaelsen vari kutungamira kodhi shanduko kuchirongwa cheLibreOffice.
mmm ini ndinofunga ndiko kuedza kwekutanga kweshanduko inotevera muiri interface, neiyi ini ndinofunga kuti ivo vanozoisa akawanda uye ari nani maitiro ekugadzirisa sezvazvinoitika ne firefox, kubva pano kuti programmers vanogona zvakare kugadzira madingindira avo vovagovana, pamwe akasiyana masisitimu eInternet, Kwaziso.
streak yakanaka kuti ukwanise kuchinja mifananidzo
Mashandisiro ekushandisa Raspberry pi se media media
Maitiro ekuisa Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal nhanho nhanho